Sahityapati - Setopati | Setopati - Nepal's Digital Newspaper
कथा : बिशाखा
–यादव देवकोटा - यही जिन्दगीमा उनीसँग फेरि भेट होला भनेर सोचेकै थिइन । बाँचिबसे फेरि भेटौंला–बूढा पाकाहरु भन्थे एकमेसो भेटिएर छुट्न लागेकाहरुसँग । म दंग पर्थे–बाटोमा भेटिएर बाटोमै छुट्टिन लागेकाहरूसँग कसरी भेट्ने होला फेरि ? यतिका वर्षपछि बल्ल बुझ्दैछु–हो बाँच्नुपर्ने रहेछ, भेटिँदा रहेछन् छुटेका मानिसहरु । जीवनको एउटा याममा दर्केझरीसँग भेटेझैं भेटिएर छुटेका मान्छेहरुसँ पनि भेट हुने रहेछ । सोह्र बर्षपछि उनीसँग फेरि भेट भयो अर्थात् खोलो फर्कियो ।
वृद्धा आमा र अनुत्तरित प्रश्न
भूमीश्वर पौडेल - मन दह्रो बनाएर २० रूपैयाँको नोट आमैलाई दिएँ । लिइन् । हाँसिन् आधामात्रै ! सोध्न मन लाग्यो, यिनले आफ्नो जिन्दगीमा पूरा हाँसेकी छन् कि छैनन्? सोध्न मन लाग्यो, यिनले जिन्दगीमा पूरा पेट खाएकी छन् कि छैनन् ? सोध्न मन लाग्यो, यिनले जिन्दगीमा मानिसको पूरा साथ पाएकी छन् कि छैनन् ? सय मुरी धान फल्ने खेत, सम्झँदा मन सयपटक फुरुङ्ग हुन्थ्यो । जागीरे श्रीमान्, त्यो पनि भन्सारमा । खानलाउनको पिर थिएन । मनमौजी थियो । गाउँघरमा गाह्रोसाह्रो पर्दा कुनै चिजको अभाव हुँदैनथ्यो । लाग्थ्यो, जिन्दगी सधैं जितेरै बित्ने भो । कहिल्यै हार्नुपर्दैन अब । कहाँ हुँदोरैछ र सोचेजस्तो, देखेजस्तो ।
दमिनीले भीरबाट हाम फाली
राजन मुकारुङ - चार वर्षअघिसम्म— हिउँद लाग्यो कि ढाकर–टेकुवा निस्कन्थे घरघरबाट। गाउ“को पसलमा छोइसक्नु होइन। पैसोको उस्तै अभाव। बर्खाभरिलाई चाहिने सामान किन्न पुग्नुपथ्र्यो धनकुटा–हिले। अ“धेरीघाट तरेर। अझ अघिसम्म त पिखुवाको बाइसे ज“घार तर्दै अक्करको भीर खपेर चतरासम्म पुग्नै पथ्र्यो। पछि सुरु भएको हो अँधेरीघाटको बाटो।
सम्झनाको क्यानभासमा मेरो प्रेम
योगेश ढकाल - अन्तैबाट सुनेँ, स्वयम्बर हुँदैछ । बरणी गरिँदैछ। सिउँदो रंगीन बन्दैछ । खबरसँगै बर्खे झरीमा पनि छातीभित्र डढेलो सल्केको छ,चैतको भस्मेमाझै। खर र बुढा रुखझै एकएक गरी अंगहरु जल्न थाले ब्या मण्डपको अग्नीकुण्डमा । मसंगका सबै याद,स्मृति,सपनाहरु चरुझै हवन गदैछिन् । दमाहा र ट्याम्को ठोक्दा मेरै मुटुमा ठोकेजस्तो लागिरा’छ । उनको सिउँदो रंगिदा मुटु चिरिएझै लाग्छ। रक्तसञ्चारका धमनीहरु रौंचिरा पर्दैछन्।
बाले भनेका कुरा
दिनकर नेपाल - 'बा! म आज सेतेका घर जान्छु न, भात खान।' बाले एक चड्कन दिनुभयो मेरो घाम तेतिबेलै डुब्यो, अँधेरोमा तारा देखें, त्यही ध्रुव तारा बन्यो त्यो चड्कनको भाषा ध्रुवसत्य बन्यो।
हामीले नदेखेका हिप्पी
महेश्वर आचार्य - शेखरले आफू हुर्किएको बानेश्वरको, आफूले पढ्दाको लण्डनको संस्मरण उतारेका छन् । त्यस्तै, जिम मोरिसन, गान्धी, कविवर माधव घिमिरे, डिपि भण्डारी, अभि सुवेदी, खगेन्द्र संग्रौला लगायतका प्रसङ्गका साथै कलाकार लक्ष्मण श्रेष्ठ, सङ्गीतकारहरु मनोहरि सिंह, लुइ ब्याङ्स् लगायतको व्यक्तिचित्र पनि उतारेका छन् ।
सिपी अर्याल - कैँची चलाउन भर्खर सिकेको थिएँ । साइकल पाएपछि पृथ्वीकै फन्को लाउँछु जस्तो लाग्थ्यो । लामो गद्दि भएको र बुढाखाडाले चलाउने स्टाइलको थियो त्यो साइकल । त्यसलाई आफ्नो कब्जामा पार्न म हरकोशिस गर्थेँ । स्कुल जान मन नलाग्दा साइकल लिएर गाउँतिर जान्थेँ, तौलिहवा बजारबाट १० किलोमिटर पर भारतीय सीमासम्मै पुग्थेँ ।
उपन्यास अंश: ताजमहलमा भूपि शेरचन
नयनराज पाण्डे - त्यहाँ शाहजहाँ आए । चिन्तित मुद्रामा सेतो दाह्री मुसार्दै । उनी आएपछि मुमताज पनि आइन् । उनको अनुहारमा पनि उति सारो रौनक थिएन । उनीहरु दुवैले हामीसित याचना गरे, “तपाईंहरु यो संसारको आजसम्मको सबैभन्दा सुन्दर जोडी हुनुहुन्छ । यो सबैले थाहा पाइसकेको कुरा हो । तपाईंहरु हाम्रो ताज महलमा आउनुभो । ताज महल पवित्र भो । यो अझै सुन्दर भो । तर अब तपाईंहरु जानुहोस् ।”
काठमान्डु कथा: बिहान अचानक आकाश खुलेपछि
मनोज दाहाल - घामको मधुरो तातोले हातका रौंमा कुतकुती लाग्यो। घाम आफ्नो पूर्ण तेजमा थियो तर उसले फ्यालेको प्रकाशले शरीरमा यसरी स्पर्ष गरिरहेको थियो, मानौं गुलाबको बगैँचामा फक्रिएका फूलहरूले कुत्कुत्याइरहेका हुन्। घामको मधुरो तातोले हातका रौंमा कुतकुती लाग्यो। काठमान्डुमाथिको आकाश हेरेँ– घामको प्रकाशमा यसरी खुलेको थियो, मानौं शिवपुरीको चुचुरोमा टेकेर म संसार हेरिरहेको छु ।
फर्केर आउँदा छोरा चिसो भइसकेको थियो
जनकराज सापकोटा - त्यो साँझ फर्केर राजविराज पुगेपछि मलाई मेरी आमा र पुलमको अनुहार एकपछि अर्को गर्दै आईरह्यो । मेरी आमाले पनि जन्मेको केही दिनमै मेरो दाइलाई गुमाएकी थिइन् रे । एकदिन आमाले त्यो कुरा मलाई सुनाउँदा आमाको आँखाको डिल टम्म भरिएको थिए । आमा रोएको कसलाई मन पर्छ र ?
शिव प्रकाश - “म जहाँ रहूँ ! घरदेशमा रहूँ कि परदेशमा रहूँ ? कसैसँग कुनै साइनोमा बाँधिएर धरतीमा रहुँ कि पातालामा रहूँ ? स्वतन्त्र रहूँ कि परतन्त्र रहूँ ? बाँचेर मरिरहूँ कि मरेर बाँचिरहूँ ?” धेरै मान्छे मुखामुख गर्न थाल्छन्– यसले के भन्न खोजिरहेछ ? केही मुखहरु कानसँग जोडिएर खासखुस र गानगुन गर्न थाल्छन्, “यो साँच्चै पागल भयो कि क्या हो ?”
ऋषि तिम्सिना - रियाका आँखा एक हातमा फुसफुसाइरहेको सिगरेट र अर्को हातमा ऊजस्तै केटी च्यापेर गेटबाहिर उभिएको जिङ्ग्रिङ्ग कपाल भएको लिखुरे केटामा पर्छ । अलि परर्तिर अर्को कालो चस्माधारी आफ्नो अजङ्गको भटभटे आकाशै भत्कने गरी आवाज निकाल्दै स्टार्ट गर्छ । नजिकै उभिइरहेकी अर्की सुसुपाल युवती उसको भटभटेको पछाडिपट्टिको भागमा राम्रोसँग बस्नै नपाई टाँसिन्छे ।
रजित ओझा - "एकान्त पातलो हुन्छ,सानो क्षणले पातलिन्छ, सानो साथले चिरिन्छ,करिब दुइ मिनटदेखि म एक्ली छैन, ल्याए हुन्छ !" उसले स्विकृति दिई। पहिलो चरण मैले सफलतापूर्वक पार गरेँ! वाइनमा डुवेर उसको ओठ अझ रसिलो देखियो। मैले आँखा हटाउन सकिन।
रोहित खतिवडा - यही इमेलबाट उसँग अर्को सम्बन्ध अघि बढ्यो । एकै दिन देखि उसँग दुइवटा सम्बन्ध बन्यो । फोनमा र इमेलमा एउटी पाठकसँग लेखकको सम्बन्ध र भेटमा एउटा साधारण साथीको सम्बन्ध । काठमाडौं बसुन्जेल उसले आफ्नो प्रिय लेखकलाई कहिल्यै भेट्न सकिन् । तर, उसले त्यही व्यक्तिलाई प्रायः साँझहरुमा कीर्तिपुर भ्यु क्याफेको छतमा भेटिरही एउटा साथीको रुपमा भेटिरही ।
कथा : यत्रो वर्ष बन्दुक बोकियो, अहिले क्यै न क्यै
दीपेन्द्र ठकुरी - म वीरेको पीडा आँकलन गर्न सक्थे। उसले धेरै थोक गुमाएथ्यो युद्धमा पसेर। जवानीका उर्जाशील वर्षहरु खेर फालेथ्यो। 'खेर' नै भन्छु म, उपयोग या सदुपयोग त कसरी भन्नु र! न उस्को कदर छ, न उसकै काखमा तातो गोली खाएर मर्नेहरुको।
जानकी गौतम - फोनमा लोग्नेको खुशी सम्झी, ‘प्यारी म भोलि उड्दैछु नि, आहा कस्तो आतुरी भा छ ह्याँ मलाई ।’ उदासीन मनलाई मलजल गरेझैँ कसैले सुनायो, ‘थाहा छ भाउजू त्यो चन्द्रे दाइ त दलाल पो र छ ! ए, त्यस्ताले पनि हजुर्लाई दिदी भन्दै खूब चेपारो घस्थ्यो है ?’
बररररर्र आमाका आँशु
प्रकाश लामिछाने - मैले ब्रमाण्डका सारा ग्रह-उपग्रह, तारापुञ्ज, नक्षत्र सबै आफ्नै आँखा अगाडि नाचिरहेको देखेँ । सूर्यको दशौँ हज्जार डिग्रीको तातोले पोलेको अनुभूति भो जिउमा । धरहराजस्ता सातवटा स्तम्भबाट खसेको जस्तो शिथिल अनि थनथिलो भो ज्यान । अचानक बिद्युतीय उपकरणजस्तो स्वचालित हुँदै मेरो हात कतिखेर उठेर बसन्तको नाक्चोमा बजारिन पुगेछ पत्तो पाईन मैले ।
प्रेमका भ्रमहरु प्रिय छन् मलाई
सायद अशोक - मेरा केही महत्वाकांक्षाले मलाई बाँधेका छन् । त्यही भएर कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ, म कोही एकजनासँग मात्रै इमान्दार हुन सक्दिनँ । म भिन्दाभिन्दै स्त्रीहरुमा मैले खोजेका गुणहरु भेटिरहेको हुन्छु । ती सबैलाई सग्लो स्वरुप दिने मेरो उच्च आकांक्षा घरिघरि भत्किइरहन्छ । तर समयक्रममा मलाई मेरा विश्रृंखलताहरुबाट तिनै खोजहरुले सम्हालेका छन् ।
श्रीकृष्णलाई मन पर्ने राग मलहारको ‘रोमान्स’
अशोक माथुर - साउन महिनामा गाइने राग मलहारबारे केही भन्नुअघि ठाकुरजी अथवा श्रीकृष्ण भगवानलाई अर्पण गरिने सेवाका तीन विधिबारे केही उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । पुस्टिमार्गले ईश्वरसँगको हाम्रो सामिप्यलाई वर्षभरि नै मनाउन प्रोत्साहित गर्दछ । त्यसैले हामी श्रृंगार, भोग र राग विभिन्न तरिकाले अर्पण गर्ने गर्दछौं, ऋतुहरुमा आउने परिवर्तनसँगै ।
सुबि, आर यु स्टिल भर्जिन ?
विनिता दाहाल - उसबारे मैले नसोचेको केही दिन भएर रहेछ, म आजकाल आफैँलाई फिक्का मान्दै थिएँ । आज उसको याद तिमीले गाढा बनाइदियौ । विपश्यनाको कुनै कठोर साधनामा लीन होला सायद । अन्तर्आत्माको यात्रामा आफैँलाई नियाल्दै । वा, धम्मश्र्रंगका वर्षेझार टिपेर साधनामा तृप्त साधकको सेवा गरिरहेको हो ।
कथा: जीवन–गुरु जो गुलाब रोपिरहन्छ
मिनु श्रेष्ठ - ऊ नाम्चीबजार छिर्ने सडकको दायाँबाँया फूलहरू रोप्न तल्लीन थियो । बिहानै उठ्थ्यो र अबेरसम्म फूलहरु स्याहाथ्र्यो । ऊ फकिरजस्तो थियो । जीवनमा बाँकी कुनै मोह नभएजस्तो तृप्त । तर आँखाका कुनामा पीडाका अनन्त पत्रहरू थिए । कुनै ग्रिक कविजस्तो उसको अनुहारलाई हेरेर मान्छेहरू विभिन्न अनुमान लगाउँथे । भन्थे, यो पागल हो ।
कोलोराडो खोँचमा विष्णु मन्दिर
सोम खनाल - अनकण्टारको त्यो बिष्णु मन्दिरको सम्झना गर्दा मेरो हृदय सँधै क्लारेन्स ड्युटनप्रति नतमस्तक हुने गर्छ । म कल्पनामै अनकण्टारको त्यो बिष्णु मन्दिरकै समानान्तर त्यस्तै चुचुरोको निर्माण गरिरहेको हुन्छु र त्यसको हार्दिक नामाकरण गरिरहेको हुन्छु– क्लारेन्स ड्युटन मन्दिर।
कथा : के म द्वन्द्वपीडित होइन?
टीका बिष्ट - युद्धविराम भयो । सोचें, त्यसपछि सन्दीपसँग खुलस्त कुरा गरौंला । वैधानिक रूपमा पार्टी बन्दुक बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आयो । घर जाने वातावरण बनाउँछु भनी गएको ऊ बेखबर भयो । मसँग टाढिन खोजेको महसुस गरें । एकदिन खोज्दै उसको गाउँमै गएँ । म आएको थाहा पाएर चौतारोमै भेट्न आयो । मन खुशी भयो । उसको पहिलो वाक्य नै ‘डिभोर्स गरौं’ भन्ने थियो ।
कथा : बिल्टुकी दुखिनी
केशव दाहाल - बिल्टुको मनमा आशाका नयाँ तस्बिरहरू नाचे र कानमा संगीतको मीठो धुन बज्न थाल्यो । आज त्यो संगीत ऊ दुखिनीलाई सुनाउन चाहन्छ । बिल्टु घरभित्र पस्यो । दुखिनी शान्त थिई । उसले आफ्नी दुखिनीलाई नियालेर हेर्‍यो । सबैभन्दा मायालाग्दी उसकी आइमाइ आँखा चिम्लिएर सुतेकी थिई । दुखिनीको आँखाको आँसु ओभाएको पनि थिएन तर उसको शरीर चिसो र मौन थियो ।
समाजको मनमुटु छुने सिर्जना
शिव प्रकाश - देवकोटाको मुनामदनले समाजको मनमुटु छामेको छ । हृदयको कोमलतालाई छोएको छ । समाजले पनि मुनामदनमा आफ्नै विम्ब–प्रतिविम्बहरु भेट्टाउँछ । र त जिब्राजिब्रामा सधैं झुण्डिएको छ– “सुनको थैला, हातको मैला के गर्नु धनले, साग र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले ।”
मेरा बा, मेरो स्कुल
मोहराज शर्मा - लाऽऽ मैले दुधमिठाई चोरेको बाले था’ पाउनु भएछ । अब के हुने हो । मुठ्ठी जाँघेको खल्तीमा राख्दै थर्थर गर्दै नजिकै गएँ । मलाई बादेखि निकै डर लाग्थ्यो । दुईतीन वर्र्षको एकपल्ट बल्ल घर आउनुहुन्थ्यो अनि महिना दुई महिनामा फेरि केरला जानुहुन्थ्यो । त्यसैले झ्याम्मिन डर लाग्थ्यो । उहाँको चर्को डाँको थियो । काखमा बस्ने त कुरै छोडौं, नजिक हुँदा पनि मेरो आधा होस् उड्थ्यो ।
एक ठूला ‘खराब’ मानिस
डा. ध्रुवचन्द्र गौतम - मिडिया जहिले पनि नायक–नायिकामुखी थिए र छन् । त्यसैले पनि प्राणको निजी जीवनबारे धेरै जानकारी बाहिर आउनै पाएन । उनलाई जतिले चिने, केवल फिल्मी व्यक्तिकै रुपमा चिने । उनको त्यहि व्यक्तित्व हाम्रा लागि सबैथोक भइदियो । जतिले लेखे केवल उही विवरण मात्र दोहो¥याए, उनी सन् १९२० मा जन्मेका थिए, उनी दिल्लीका हुन् र उनको नाउँ प्राणनाथ सिकन्द हो– यस्तैयस्तै ।
युद्धकथाः आँशुको आकास
यादव देवकोटा - देश लडाइँमा थियो । हामी लडाइँमा थियौं । कालिकाटार प्रहरी चौकी माथिको रेड । हामी सिक्दै थियौं लड्न । लड्दै जित्न । एउटा मोर्चामा लड्नु अर्को मोर्चाको लागि लडाइँको सिकाइ थियो । कालिकाटारमा न हार भो न जित । केही सिकियो । साथी गुमाइयो एउटा ।
यात्रा अमेरिकी विश्वविद्यालयको
सागर पराजुली - यो विश्वविद्यालय करीब ५०,००० विद्यार्थि र १७,००० कर्मचारीहरुको घर हो । यो खेलकुद क्षेत्रमा निकै अगाडि छ । सन् २०१२ सम्म यहाँका विद्यार्थीले करिब १३० वटा ओलम्पिक पदक जितिसकेका छन् । अमेरिकन सर्टिफिकेट खोज्दै आएका हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको भिडमा म पनि हराएँ ।
अल्मलियो क्रान्ति, हराए कमरेड
शोभा शर्मा - ऊ अझै नजिक आउन थाल्यो । मैले रोकिन पनि । के मैले उसलाई प्रेम गर्न थालेँ ? मलाई फेरि जिन्दगीको मोह जाग्दै थियो । तर मैले बाँच्न र हाँस्न राम्रोसँग जानेकै थिइन । कमरेड चित्र थिएनन्, आमा थिइनन्, बा पनि थिएनन् । साथीभाइका नाममा आधारमात्रै थियो । अरुसँग सम्बन्ध बढाउन मन थिएन । म यसरी गुप्तबास बसेको उसलाई किन मन पर्थ्यो र, थर्काउँथ्यो । उसका आँखामा मैले अर्कै मोह देख्न थालेकी थिएँ र एक्लै रमाइरहेकी थिएँ ।